बङ्गलादेशको मुस्लिम दलका एक नेतालाई मृत्युदण्ड
ढाका, १ असार । बङ्गलादेशको उच्च अदालतले एकजना मुस्लिम वरिष्ठ नेतालाई मृत्युदण्डको सजायको सदर गरेको छ । देशमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलिरहेको समयमा भएको युद्धअपराधको आरोप उनीमाथि थियो । यसअघिको अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएकोमा...
एयर इण्डियामा तीन सयलाई जागिर, भर्नुहोस् आवेदन
काठमाडौं, १ असार । भारतकै नम्बर वान विमान कम्पनी एयर इण्डिया एयर ट्रान्सपोर्ट सर्विस लिमिटेडले ३ सय कर्मचारीका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार एजेण्टलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्नका लागि एयर...
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा बुसबाट उम्मेदवारी घोषणा, ओबामाको आलोचना
वासिङ्टन, १ असार । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जेब बुसले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले रिपब्लिकनका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो । फ्लोरिडा राज्यका पूर्व गभर्नर उहाँले सोमबार आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो ।...
एकाविहानै चरासँग ठोक्किएर सेनाको लडाकू विमान दुर्घटना
काठमाडौं, १ असार । नियमित कार्यका लागि उडेको एक वायुसेनाको लडाकू विमान मंगलबार चरासँग ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको छ । भारतीय वायुसेनाको लड़ाकू विमान जगुआर उत्तर प्रदेशको इलाहाबादमा चरासँग ठोक्किएर दुर्घटनचामा परेको हो । विमानका...
जिहादीसँगको झडपमा तीन प्रहरीको मृत्यु
ट्युनिस, ३२ जेठ । ट्युनिसियाको मध्य भागमा सोामबार भएको एक झडपमा तीन ट्युनिस प्रहरी र एक संदिग्ध जिहादीको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सिदी आली बेन ओउनहमा मोटरसाइकलमा आएका आतङ्ककारीले राष्ट्रिय सुरक्षा...
लिबियामा अमेरिकी सेनाको हवाई कारबाही सुरु
वासिङ्टन, ३२ जेठ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैनिकले सोमबार लिबियामा हवाई कारबाही सुरु गरेको समाचार छ । प्राप्त समाचारअनुसार लिबियामा अमेरिकी सेनाको युद्धक विमानले आइतबार अल कायदाका लडाकू बिरुद्धको कारबाही सुरु भएको र त्यसमा...
« 1 … 355 356 357 358 359 … 409 »
फुटमै पुगे नेकपा तीन टुक्रा हुने प्रक्षेपण, सरकार नेतृत्वमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई लट्री पर्न सक्छ !
कांग्रेसबाट राजीनामा दिएका दीपकुमारले उत्पात मच्चाउँदै, पाैडेल-काेइरालालाई तनाब
काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्र शुक्रबार रातीदेखि अनिश्चितकालका लागि शिल गरिँदै
प्रधानमन्त्री ओलीले टेलिफोन गरेर राजपाक्षे दाजुभाइलाई दिए बधाई
गेरु बस्त्रमा आए गायक सुगम पोखरेल, भन्छन्– बम बम भोले बम (भिडिओ)
विष्णु रिमालले नारायणकाजीलाई भने– नेताहरूलाई गुटबन्दीको आगोमा पोल्न उत्तोलक नबन्नुस् !
भारतको केरलामा यात्रुबाहक विमान दुर्घटना, पाइलटसहित ३ जनाको मत्यु (भिडियोसहित)
पाँच जनाद्वारा महिलालाई बलात्कारपछि चोरी गरेर फरार
टाटाका सवारी साधन खरिद गर्न एनआईसी एशिया बैंक ऋण दिने, ६ महिना किस्ता तिर्नुनपर्ने
एसबिआई बैंकका ग्राहकलाई सोल्टीमा छुट
लोकगायक प्रेमराजा महत र उनकी पत्नीलाई कोरोनाकाे संक्रमण